မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXX | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXX
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXX
Posted by Kyaemon on Feb 5, 2017 in Business & Economics, Education, Think Different |4comments
သမတဟောင်း Obama အိုဘားမားလက်ထက်မှာ စွမ်းအားဝန်ကြီး နှစ်ဦး ရှိခဲ့တယ်၊
နှစ်ဦးစလုံးထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြ သူ ပါမောက္ခတွေပါ၊
ကြီး Stanford တက္ကသိုလ် မှာစာပြဋ္ဌာန ကြီးမှူး ဆရာကြီး
Moniz was born in 1944 in Fall River, Massachusetts, to Georgina (Pavão) Moniz and Ernest Perry Moniz, both of whose parents were Portuguese immigrants from São Miguel Island, Azores. He graduated from Durfee High School in Fall River, Massachusetts in 1962, where he wasamember of the National Honor Society and was the president of the school’s math club. Moniz attended Boston College, where he received his Bachelor of Science summa cum laude in physics. He received his PhD in theoretical physics from Stanford University in 1972.
U.S. Secretary of Energy (2013–present)
Secretary Moniz playedacrucial role in negotiations towardacomprehensive agreement on the Iranian nuclear program, directly negotiating technical details with the Iranian atomic energy minister Ali Akbar Salehi, an MIT graduate, and reassuring President Obama that concessions important to the Iranians would not poseamajor threat. The comprehensive agreement between Iran and the so-called “P5+1” (which includes the5permanent members of the UN Security Council, plus Germany andarepresentative from the European Union) was finalized on July 14, 2015, to much fanfare and criticism.
PRT Order of Prince Henry – Grand Cross BAR.png Grand Cross of the Order of Prince Henry, Portugal
စွမ်းအားဝန်ကြီး Moniz မွန်နဇ် က De Brito (ငဇင်းဂါးလို) ပါ်တူgeဇာတိနွယ်ဘွား အမေရိကန်ပေါက်ဖြစ်ပြီး၊
အနုမြူလက်နက်မပြန့်ပွါးရအောင် အီရန်နိုင်ငံနဲ့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပွဲက အရေးပါတဲ့အပိုင်းမှာ
သူ့လက်ထက်မှာ ရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမျော်မှန်းချက်ကိုပြုစုနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းအစီရင်ခံစာကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်၊
Steven Chu စဗင်ချူးကမွန်နစ်ရဲ့နောင်တော်ဝန်ကြီးပါ၊သူကတရုပ်ဇာတနွယ် အမေရိကန်ပေါက်
ဖြစ်ပြီး နနံမယ်ကြီး နနိုဘယ် ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်၊
သူတို့စွမ်းအားဝန်ကြီးနှစ်ဦးက ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ပေါ်လစီ က သိပ်မကွာလှပါ၊
ရေအားလျှပ်စစ်ကို (ကန့်ကွက်ဘို့နေနေသာသာ)၎င်းကို အားပေးကြတယ်၊အရေးပေးတယ်၊ရေကာတာ
အသစ် တိုးချဲ့ဆောက်တည်ဘို့ကို၎င်း၊ရိုးရိုးဆည်တွေကိုတောင်လျှပ်စစ် စွမ်းအားပါထုတ်နိုင်ဘို့ကို၎င်း
Steven စတီဗင် ကအနုမြူလျှပ်စစ်၊လေအားလျှပ်စစ် နဲ့နေအားလျှပ်စစ်ပါတိုက်တွန်းသော်လည်း
သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ် အချို့က ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် ကြီးတယ်ဆိုပြီး
Green Rivers Network နဲ့ဆရာဦးထွန်းလွင်တို့ရဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် ရေကာတာ အားလုံး ရပ် ဆိုတဲ့
ရအားလျှပ်စစ်စွမ်းအား ဟာ ယခင်က(အရေးပါတဲ့)စွမ်းအားတရပ်
ဖစ်ခဲ့တယ်၊ခုလဲဒီ တိုင်း၊နောင်လဲ ဒီတိုင်း(အမြဲတစေ အရေးပါမဲ့)စွမ်းအားတရပ်
Hydropower: An Energy Source for the Past, Present, and Future
BOB GALLO | AUGUST 11, 2016
Last month, thousands of likeminded people gathered inapacked convention hall to celebrateacause about which they care deeply. Some may think this phenomenon was exclusive to Philadelphia and the Democratic National Convention, or the Republicans in Cleveland the week before. But it also occurred in Minnesota, where the largest hydropower convention in the world — HydroVision International — took place at the Minneapolis Convention Center.
HydroVision attendees had reason for their bullishness. No other source of energy combines hydropower’s affordability, contributions to combating climate change, and job creation. Far from an old and conventional source of energy, clean and renewable hydropower is constantly evolving and searching for new methods to squeeze energy out of the approximately 80,000 U.S. dams that do not produce power. In many cases, hydropower provides backup generation to support the development of intermittent energy sources such
His nomination to be Secretary of Energy was unanimously confirmed by the U.S. Senate on January 20, 2009. On January 21, 2009, Chu was sworn in as Secretary of Energy in the Barack Obama administration. Chu is the first person appointed to the U.S. Cabinet after having wonaNobel Prize. He is also the second Chinese American to beamember of the U.S. Cabinet, after former Secretary of Labor Elaine Chao.///
(နဂိုရ်က အလွန်ကြီးမှား တာကြောင့်)
ဒီလို၂ ဆ ဆိုတာက အင်မတန်ခ ကြီးမားတာ ပါဘဲ
လက်ရှိရေကာတာ မှာ ပိုစွမ်းတဲ့လျှပ်စစ်Turbine တာဘိုင်စက်ခေါင်းလဲရုံ
နဲ့အခြား အသေးစား ရကာတာ ဖည့်စွက်ရုံနဲ့ဘဲ
၇၅၀၀ဝ MW လျှပ်စစ်စွမ်းအား တိုးထုတ်လုပ်နိုင်းမယ် လို့ဝန်ကြီး
Steven စဗင် ကအစိုးရ စည်းဝေးပွဲမှာပြောပါတယ်၊
လက်ရှိက ၉၈၀၀ဝ MW လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊လူပေါင်း
(၂၀၁၁ က မြန်မာ သုံး လျှပ်စစ်က ၆၀ဝ MW နဲ့ယှဉ်ရင် အဆ
ပေါင်း ၁၆ဝ ဆ ကျော်လို ဇီစေ့နဲ့မြင့်မိုရ်တောင်ပါ၊
တဘက်ကAmerican မြင့်မိုရ်တောင် နောက်တလုံး တိုးမှာဖြစ်ပြီး
တဘက်ကြတော့Myanmar လက်ထဲက ဇီးစေ့ ပါ ပျောက်သွားမလား
၂၀၀၉ က ဝန်ကြီး Steven စတီဗင် နာ်ဝေရေအားလျှပ်စစ် ရကာတာစက်ရုံတွေကို
.ရေအားလျှပ်စစ်တော့ ဘယ်လို စခန်းသွားကြမယ် မသိ။
.လေအားလျှပ်စစ် လုပ်ဖို့ ဆိုပြီး ပညာရှင်တချို့နဲ့ နယ်ဒေသတွေကို လေ့လာရေး ထွက်/အခြေအနေ လေ့လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်အုပ်နဲ့… ကျနော် ပါသွားဖူးတယ်။
.လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်ရာမှာ တည်ရမယ့် ပန်ကာဒလက်လို ဟာကြီးတွေ… ဘာတွေ ညာတွေ…
နယ်ဒေသ မြစ်ကမ်းဘေးတို့ တောင်ကုန်းပေါ်တို့ကို အရောက်သယ်ရမှာကြောင့် လမ်း/တံတား အနေအထားကိုပါ ထည့် လေ့လာကြတာ…
လမ်းတွေက သုံးစား မရဘူး။ တန်ချိန်များများ တင်လာတဲ့ ကားကြီးတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူး။
.ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကလည်း… မြစ်တော်တော်များများမှ သောင်တွေထွန်း….
မြစ်ကို စနစ်တကျ ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း မရှိရှာ….
ဆိုတော့ .. ဗမာပြည်အတွက်… ဥုံဖွဆိုပြီး တတိုင်း ရစေမယ့် တန်ခိုးရှင်တွေသာ လွှတ်ပေးပါတော့ ဘုရားသခင်…လို့ ညည်းရမလား…
တော်တော် ဝဋ်ကြီးတဲ့ ဗမာပြည်လို့ ညည်းရမလားပဲ